Rlọ ọrụ ihe nkedo ihe nkedo nke ihe nkedo nke ihe eji eme ihe - China - Thermopile Infrared Sensor Module Manufacturers
MSE Thermopile Infrared Temprature Scanner Module maka ihu ihu igwe nyocha
YY-MSE ụdị thermopile infrared modul bụ ngwa mmụba nke okpomọkụ dabere na infrared single-point ultra-thin surface mount sensor onwe nke mepụtara site na Sunshine. O kwesịrị ekwesị maka mmesịa okpomọkụ nke ekwentị mkpanaaka na akụrụngwa ndị ọzọ nwere ọgụgụ isi.
MSC Single-Point Infrared Temprechọ Mkpụrụ Module E Ji Maka Ihu Igwe Igwe Igwe Igwe
MSC ụdị otu-infrared okpomọkụ na-atụle modul modulu bụ ihe eji atụ okpomọkụ na-adabere na isi infrared infrared nke onwe ya mepụtara site na Sunshine Technologies. Okwesiri maka ngbanye okpomoku di nso, nke puru ichoputa onodu nke ihe a, aru nke aru ya na ihe ndi ozo. Ọ nwere njirimara nke enweghị kọntaktị, nzaghachi ngwa ngwa na ntụgharị data dị mfe. Usoro nha ihu igwe ya na ndi ogwu n’egedege ihu.
MSA Kpọtụrụ na-enweghị ọnọdụ okpomọkụ Thermopile Infrared Sensor Module maka Sistemụ Njikwa Access
MSA ụdị modrared infrared canada infrared bụ ihe dịpụrụ adịpụ nke na-adabere na ntanetị infrared otu na-adabere na Sunshine Teknụzụ. Modul ahụ nwere njirimara nke ndị na-abụghị kọntaktị, anya nwere ike idozi yana azịza ngwa ngwa. Modul ahụ nwere interface nkwukọrịta dị mfe, njirimara ngwa anya ya pụrụ iche na-eme ka ọ dabara maka mmụba okpomọkụ dịpụrụ adịpụ. Ọ na-ọtụtụ-eji dị iche iche na ngwa, dị ka ohere akara, n'ọnụ ụzọ ámá na-agafe na na.
Infrared okpomọkụ N'ihe Ngosipụta Sensor Array maka Igwe Igwe Igwe Igwe Igwe Ahụ YY-160A
Ihe nkwụnye ahụ dị mma maka ụfọdụ ndị ahịa na-achọghị SPI ngwa interface, ma jikọọ na sọftụwia na-esite na V-Com na ọdụ ụgbọ mmiri mebere.
Infrared Thermal Imaging Array Sensor Module Na-enweghị Mmetụta Ọdịmma YY-32A
Igwe ihe onyonyo nke okpomoku bu ihe mejuputara. Site na FPC-15 ma ọ bụ 2.0-10 okpukpu abụọ nkwụnye nkwụnye nkwụnye igwe iji kpọtụrụ ụwa dị n'èzí, mmepụta dị iche iche na nzaghachi dị elu.